अभावमा उदाएकी भावनाको बक्सर बन्ने चाहाना |
अभावमा उदाएकी भावनाको बक्सर बन्ने चाहाना
प्रकाशित मिति :2019-06-05 15:01:10
बाजुरा । भनिन्छ ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन ।’ मन लागेको काम गर्न जुनसुकै अवरोध र पर्खालहरु खडा भए पनि मान्छे पछि हट्दैन भन्ने कुरा बाजुराकी किशोरी भावना ऐडीबाट प्रष्ट हुन्छ ।
घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । तर पनि बक्सिङमा अन्तर्राष्ट्रिय छबी बनाउने उद्देश्य राखेर भर्खर बामे सर्दै गरेकी भावना ऐडीको खेल मोह देख्ने जो कोहीले भन्छन्, ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन ।’
छोरीलाई घरभित्रको काममा मात्रै फिट देख्छ बाजुराको समाज । त्यो भन्दा फरक भूमिकामा देखे घर पायक पर्ने बिहानदेखि बेलुकाको जागिर । तर एक त खेल त्यो पनि बक्सिङ् । परिवारले कसरी हुन्छ भन्नु ? प्रतिस्पर्धीसँग तागतले जित्नुपर्ने खेल । अंगभंग भए के गर्ने ? त्यसैमाथि कृषिमा मात्रै निर्भर ६० कटेका बाबुआमासँग छोरीलाई प्रशिक्षण खर्च दिने कुनै उपाय नहुँदाको बाध्यता जो छ ।
यस्तै अभाव र दबाबका बीच पनि भावनाको बक्सर बन्ने धोको ठूलो छ ।
घरमा काम नगरेर खान पनि पुग्दैन । तर पनि भावनाले छोटो समयमै राष्ट्रिय रुपमा बक्सिङ खेलाडीको पहिचान बनाइसकिन् । १८ वर्षीया भावना ऐडीलाई खेलप्रति दिनदिनै मोह बढ्दो छ । यो खेल छोड्ने सपनामा समेत देखेकी छैनन् ।
बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ८ की भावना यतिबेला घरमा चाँजोपाँजो मिलाएर कुनै काम छैन भने मात्रै बक्सिङ सिक्न जान पाउँछिन् । सिक्ने ठाउँ नजिक छैन । ३ घण्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । त्यो पनि एक्लै । सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खेलकुदमा आएर बक्सिङ सिक्छिन् उनी । त्यहाँ पनि बक्सिङ सिकाउने प्रशिक्षक छैनन् । सेवाको रुपमा योगेन्द्र थापाले बक्सिङ सिकाइरहेका छन् ।
२०७५ सालदेखि बक्सिङ सिक्न शुरु गरेकी भावनाले ५७ केजी तौलमा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सहभागी हुने मौका पाइन् । र तेस्रो स्थान हात पारिन् ।
बक्सिङ सिक्न शुरु गरेको धेरै समय नभए पनि पनि उनले आठौ राष्ट्रिय खेलकुदमा तेस्रो स्थान हात पारिन् । उक्त खेलमा नेपाल आर्मी प्रथम र पुलिस दोस्रो भएका थिए ।
यस्तै भावना प्रदेश स्तरीय गणेशमान बक्सिङ प्रतियोगितामा पनि दोस्रो भइन् ।
‘बक्सिङ खेल्ने निकै रहर भएर लागेकी हुँ’ भावनाले भनिन्, ‘तर घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । अभावका बीच कतिसम्म खेल्न सक्छु थाहा छैन ।’
बाजुरामा खेलकुदले प्रशिक्षक नै राखेको छैन । बाहिर अन्य ठाउँ र कुनै क्लबमा जानलाई पैंसा नभएकाले अझै सिक्ने अबसरबाट बञ्चित हुँदै गएको भावनाले बताइन् । अहिले एसईई परीक्षा दिएर बसेकी उनी घरको काममा ब्यस्त छन् । ‘पैंसा भएको भए धनगढी, काठमाडौं गएर सिक्ने थिएँ ।’ पैंसा नहुँदा रहर रहमै सिमित भएको उनले बताईन् ।
‘बाजुरामा योगेन्द्र दाईले निशुल्क सिकाइराख्नु भएको छ । तर आफूसँग सिक्ने बेला लगाउने पन्जा समेत छैन’ उनले थपिन्, ‘पन्जा नभएर खाली हातमा बक्सिङ सिक्नु परेको छ ।’
नेपाल आर्मीमा कार्यरत बाजुराकै बक्सिङ खेलाडी पुनम रावलको प्रेरणाले बक्सिङ सिकेकी भावनालाई अभिभावकले त खेल्नु पर्दैन भन्छन् । उनले भनिन्, ‘एक त छोरी मान्छे, त्यसैमा पैंसा छैन किन खेल्नु पर्यो ? त्यो भन्दा घरको काम गर भन्छन् ।’ आर्थिक रुपमा समस्या नभएको भए बकिसङमा राम्रो गर्न मन भएको उनले बताइन् ।
नियमित खेल खेल्न पाएको भए र जिल्लामै प्रशिक्षकको व्यवस्था भए अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफ्नो कला देखाउन सक्ने भावनाले बताईन् ।
प्रशिक्षक योगेन्द्र थापा भावना निकै निडर र साहसिक भएको बताउँछन् । उनमा खेलमा निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता छ भन्छन् योगेन्द्र ।
बडिमालिका नगरपालिका उपप्रमुख कबिता बिष्ट भावनामा खेलप्रतिको मोह र लगाव राम्रो देखिएको भन्दै उनको वृद्धि विकासका लागि नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने बताइन् ।